Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 wararka maanta-arlaadii.net » Madaxweynayaasha Hirshabeele &KG Oo Ka Qeyb Galay Ciyaar U Dhaxeysay Labada Maamul (Sawiro)
Kooxaha hirshabele iyo koonfurgalbeed ayaa manta ku cayaaray magroonka stadio koonis, ciyaar kamid ah horyaalka dowlad goboleedyada oo maalintii shalay ahayd ka bilowday magaalada muqdisho.
Qeybtii hore ee Ciyaarta oo ku bilaabatay weerar iyo rogaalcelis ayaa waxaa ciyaar yahanada labada dhinacba ay muujinayeen sidii ay gool u xaqiijin lahaayeen, hayeeshee ma aysan dhicin in ay goolal haleelaan maadaama daafacyada labada dhinac ay aad u adkaayeen, sidaasina waxaa ay suurtowday in qeybtii hore ee ciyaarta ay kusoo idlaato 0-0.
Ka sokoow taageerarayaasha labada xul waxaa Garoonka koonis stadium manta soo xaadiray madaxweynayaasha labada dowlad goboleed Hirshabeele KG, hogaamiyeyaasha labada xul ayaa midba midka kale laabta u qaboojiyey ciyaar yahanadooda.
Waxaa laga soo laabatay qeybtii hore oo waxaa la guda galay qeybtii dambe ee ciyaarta, nasasho daqiiqado kooban kadib ciyaaryahanada labada koox waxa ay la imaadeen dardar isbiirid xoogleh, taas oo ciyaarta kadigtay mid jawi kale gelisay.
Xulka kubada cagta KGS ayaa juhdi dheer ay sameeyeen waxa ay xaqiijiyeen goolkoodii 1 aad ee uu u saxiixay ciyaar yahan kamid ah kuwa laga soo xulay shabeelada hoose, dhacdadaasi kadib ayaa waxaa guud ahaanba is bedelay jawiga garoonka ayadoo uu noqday jawi farxadeed.
Xulka hirshabeele ayaa waxaa u bilowday murugo maadaama rajadooda garoonaka la lumiyey juhdi iyo dadaal dheer ay sameeyeen kadib waa ay haleeli waayeen in ay gool xaqiijiyaan, dhinaca kale kooxda KGS ayaa markale la imaaday gool waloow goolkaasi uu calan wadaha sheegay in uu offsite yahay.
Shirkada durdur media group ayaa wareysi la yeelatay ciyaar yahankii dhaliyey goolkii guusha ee koonfur galbeed waxaana uu sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay in uu xulkiisa guul u keeno.
Gudoomiyaha taageerayaasha Xulka KGS aadan zeytuuni isagoo aad u faraxsan ayuu sidan dareenkiisa u cabiray muuqaal sidaha durdur media, waxa uu goomiyuhu sheegay in ay uga dhaigan tahay guul aan ebid la’ arag.
Kasokoow aadan zeytuuni waxaa sidoo kale dareen kooda farxadeed cabiray qaar kamid ah jamaahiirta xulka kubada cagta ah ee KGS.
Wixii manta ka dhacay garoonka istadio koonis waxa ay ahaayeena sheeko loo yaabay maadaama ay reer koonfurgalbeed ay soo bandhigeen taageero iyo ciyaar aan caadi ahayn, taageerayaasha ayaa si qaas ah garoonka dhexdooda u ruxayey calanka koonfurgalbeed.